ဆီးချိုရောဂါလူနာများအတွက်ကလေးများအတွက်လိုအပ်သောအသိပညာ - ဆီးချိုရောဂါဆွေးနွေးမှု - စီနိုကာ
အချိန်: 2020-04-10 Hits: 199
၁။ ဆီးချိုရောဂါသည်ခေတ္တပျောက်ကွယ်သွားနိုင်သည်။ ခေတ်မှီသောနိုင်ငံတကာဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းနှင့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောကျန်းမာရေးထုတ်ကုန်များ၏မျိုးရိုးစဉ်ဆက်လျှို့ဝှက်ဆေးညွန်းမှုဝါဒဖြန့်မှုများကိုမယုံကြည်ပါနှင့်။ ကျေးဇူးပြုပြီးဒီအချက်ကိုစိတ်ထဲမှာထားပါ
၂။ အင်ဆူလင်သည်စွဲလမ်းမှုမရှိပါ။ အကယ်၍ အစောပိုင်းသွေးဂလူးကို့စ်မြင့်မားသောကြောင့်အင်ဆူလင်ကိုဆရာ ၀ န်တစ် ဦး ဦး ကသတ်မှတ်ထားပါက၊ ဤဆရာဝန်အားသင်မုန်းသင့်သည်။ အကယ်၍ အင်ဆူလင်ကိုအချိန်တန်လျှင်ပေးလျှင်၎င်းအားရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။ သို့သော်အင်ဆူလင်ကိုထုတ်ယူခြင်းသည်ဆီးချိုရောဂါပျောက်ကင်းကြောင်းမဖော်ပြသော်လည်းဤကာလအတွင်းသင်ကျန်းမာနေကြောင်းဖော်ပြသည်။
အကယ်၍ အချို့သောဆေးဝါးများကိုသင်၏မိဘများအတွက်ဆရာဝန်များကသတ်မှတ်ထားပါက၎င်းတို့အားဆေးကုသမှုအရတိတိကျကျပေးသင့်ရုံသာမကသွေးထဲရှိဂလူးကို့စ်ကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့်သူတို့၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလည်းလေ့လာသင့်သည်။ အကယ်၍ သွေးသည်ဂလူးကို့စ်ပမာဏစံသတ်မှတ်ချက်သို့မရောက်ရှိပါကဆရာဝန်များနှင့်အချိန်တန်လျှင်ဆက်သွယ်သင့်သည်၊ အကြောင်းမှာဆရာဝန်များသည်ဘုရားမဟုတ်သောကြောင့်တစ်ခါတစ်ရံရောဂါပျောက်ကင်းစေရန်ထိရောက်သောဆေးဝါးများမတွေ့ရှိနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်ဆရာဝန်များနှင့်မကြာခဏဆက်သွယ်ပါက၊ အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းချက်များကိုရှာဖွေရန်ဆရာဝန်များကိုကူညီနိုင်သည်။
၃။ သွေးထဲရှိသကြားဓာတ်ကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်သောအခါ၊ သင်သည်မည်သည့်အစာကိုမဆိုစားနိုင်သော်လည်းစားသုံးမှုပမာဏကိုဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားသင့်သည်။
4. လေ့ကျင့်ခန်းသည်သွေးအားဂလူးကို့စ်ကိုထိန်းချုပ်ရန်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ လေ့ကျင့်ခန်းအလေ့အထကောင်းတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးသွေးထဲရှိဂလူးကို့စ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်စေသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာကိုစိတ်မ ၀ င်စားဘဲလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။
၅။ သွေးဂလူးကို့စ်အားစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအားဖြင့်သွေးထဲရှိသကြားဓာတ်ပမာဏကိုလျှော့ချ။ မရပါ။ သို့သော်လက်ရှိဆေးများနှင့်အစားအစာများသည်ဆင်ခြင်တုံတရားဟုတ်မဟုတ်ကိုသင်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
1. ဆီးချိုရောဂါစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဝယ်ပါသို့မဟုတ်သင့်မိဘများအတွက်မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်ကိုယူပါ။ ပါမောက္ခ Yang Wenying၊ ပါမောက္ခ Xiang Hongding နှင့် Prof. Wang Jianhua ရေးသားသောစာအုပ်များကဲ့သို့သောဆီးချိုရောဂါဆိုင်ရာစာအုပ်များစွာကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်ရနိုင်သည်။ ဤစာအုပ်များသည်နားလည်ရလွယ်ကူပြီးလက်တွေ့ကျသည်။ ပြီးတော့သူတို့ကသင်၏မိဘများအားသွေးထဲရှိဂလူးကို့စ်အားထိန်းချုပ်ရန်အခြေခံအကျဆုံးအသိပညာကိုသိရှိစေရန်ကူညီနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်သင်မိဘများအတွက်ထိုကဲ့သို့သောအသိပညာဗဟုသုတအစုတခုကိုစာရင်းသွင်းနိုင်သည်။
၂။ အားကစားဖိနပ်များ၊ ကြက်တောင်ကြက်တောင်များ၊ အားကစားအင်္ကျီများ / ဘောင်းဘီများနှင့်စားပွဲတင်တင်းနစ်လင်းနို့များကဲ့သို့သောလေ့ကျင့်ခန်းဆိုင်ရာကိရိယာများကိုပေးခြင်းဖြင့်သင်၏မိဘများအားကောင်းသောလေ့ကျင့်ခန်းအလေ့အထကိုဖွံ့ဖြိုးအောင်ကူညီပါ။
၃။ သင်၏မိဘများကအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကိုမကြိုက်ပါကသင်၏ခွေးကလေးကိုသင့်မိဘများအားပေးနိုင်ပါသည်။ သင်၏မိဘများသည်မနက်ခင်းတွင်ခွေးကိုလမ်းလျှောက်သွားသောအခါ၎င်းတို့သည်ကောင်းမွန်သောကိုယ်ခန္ဓာတည်ဆောက်ရန်ပိုကောင်းနိုင်သည်။ သင်နှင့်အတူ လိုက်၍ မရခြင်းအတွက်သင်နောင်တရခြင်းသည်ကုစားလိမ့်မည်၊
၄။ သင်၏မိဘများအဖို့သွေးဂလူးကို့စမီတာနှင့်သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းကိုဝယ်ပါ။ သင်၏သွေးသည်ဂလူးကို့စ်တိုင်းတာမှုမှတစ်ဆင့်သင်၏သွေးသည်ဂလူးကို့စ်အဆင့်ကိုလေ့လာရန်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများမှန်ကန်စွာသုံးစွဲခြင်းရှိ၊ သင်၏မိဘများအတွက်လည်းသွေးပေါင်ချိန်မီတာကိုသင် ၀ ယ်သင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် hyperglycemia နှင့်သွေးတိုးရောဂါသည်မွေးချင်းရောဂါများဖြစ်ပြီးသွေးပေါင်ချိန်နှင့်သွေးထဲရှိသကြားဓာတ်ကိုစောင့်ကြည့်ရန်အရေးကြီးသည်။ သူတို့ဟာသိပ်ဈေးမကြီးတဲ့အတွက်ထမင်းစားချိန်ကိုရှောင်ရုံနဲ့ ၀ ယ်နိုင်ပါတယ်။
၄ မှတ်အထက်တွင်သင့်မိဘများအတွက်သင်ဝယ်ယူသင့်သောအရာများပါဝင်သည်။ ကျန်းမာရေးထုတ်ကုန်များမှမည်သည့်ကျန်းမာရေးထုတ်ကုန်များမှသွေးထဲရှိဂလူးကို့စ်ပမာဏကိုလျှော့ချနိုင်သည်ကိုရှာဖွေခြင်းမပြုပါနှင့်။ သူတို့ကိုသင်ယုံကြည်လျှင်သူတို့သည်သင်၏ငွေပေးချေမှုအတွက်မထိုက်တန်ပါ။ အရာဝတ္ထု ၄ ခုသည်ကျန်းမာရေးထုတ်ကုန်များထက်ပိုမိုထိရောက်သည်။
၅။ အိမ်မှာရှိနေရင်ညစာစားပြီးတဲ့နောက်သင့်မိဘတွေကိုလမ်းလျှောက်ပြီးသင်နှင့်အတူလိုက်ပါသွားနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်အိမ်တွင်မရှိလျှင်၎င်းတို့အားဖုန်းပိုခေါ်သင့်သည်။ အထူးသဖြင့်ဆီးချိုရောဂါကိုတိတိကျကျဖော်ထုတ်နိုင်ပြီဆိုပါကသင်၏မိဘများသည်အားနည်းနေပြီးသင်၏ထိုအချိန်တွင်သင်နေမကောင်းဖြစ်နေသောအခါသင့်ကိုဂရုစိုက်သကဲ့သို့သင်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားပေးမှုလည်းလိုအပ်သည်။ ဘာတွေထူးခြားနေလဲ၊ မင်းနေမကောင်းဖြစ်ရင်သင့်မိဘတွေကမင်းနဲ့အတူတစ်ညလုံးအတူတူ; သို့သော်သူတို့သည်လက်ရှိနေမကောင်းဖြစ်သည့်အခါသင် (သူတို့ကိုဝမ်းနည်းဖွယ်ခံစားချက်တစ်ခု) နှင့်သင်မလိုက်ပါစေပါ။
၆။ သင်၏မိဘများသည်ညှိနှိုင်းခြင်းမပြုပါကသူတို့ကိုအမြဲတမ်းပညာပေးခြင်းသို့မဟုတ်အပြစ်ပေးခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ရပါ။ သင်၏မိဘများအနေဖြင့်သွေးဂလူးကို့စ်အားထိန်းချုပ်ရာတွင်ညှိနှိုင်းခြင်းမပြုပါကများသောအားဖြင့်၎င်းတို့သည်အမှန်တကယ်တွန့်ဆုတ်မနေပါ။ သို့သော်များလွန်းသောကြောင့်ငွေအမြောက်အများပေးဆောင်ခြင်း၊ ယခုအချိန်တွင်သင်သည်သူတို့၏အနေအထားတွင်သူတို့၏စစ်မှန်သောအတွေးအခေါ်များကိုပိုမိုစဉ်းစားရမည်။
ယခင်စာမျက်နှာ အစာရှောင်ခြင်း Plasma Plasma Glucose Test> ၇ မီလီမီတာ / L ပမာဏ
နောက်စာမျက်နှာ ဆီးချိုရောဂါခံစားနေရပြီးနောက်တွင်လုပ်သင့်သောထိပ်ဆုံးအချက် ၇ ချက်